အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် Keylogger ထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်.... - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် Keylogger ထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်....
ပို့စ် 98 ခုအတွက် 1,222 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် Keylogger
ကျွန်တော် အင်တာနက်မှာရေးစရာစာမရှိရင် အရမ်းပျင်းတတ်တယ်ဗျ...
အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်တိုင်းဟာလည်း အနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်အတွက်တော့ အသုံးဝင်စေချင်ချင်ပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော်ခုရေးမယ် အကြောင်းအရာကတော့ Family Cyber Alert ဆိုတဲ့
သိပြီးသားကို ခုမှလာပြီးရေးတယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် မသိသေးသော သူငယ်ချင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ တောင်းပန်ထားပါရစေဗျာ။
အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ တီထွင်လိုက်တဲ့သူကတော့ Software ကို အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်နဲ့
အဲ့ဒါကြောင့် Family Cyber Alert ကို The Best Parental Control လို့တောင်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆော့ဝဲလ်ပြုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ...
မိဘတွေသားသမီးတွေကို စောင့်မကြည့်နိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ့်သားသမီး ဘယ်ဝက်ဆိုက်ကိုဝင်တယ်...
ဘာကားတွေကိုကြည်တယ်...ဆိုတာကိုပြန်လာရင် အချိန်တိုင်း၇ဲ့အသုံးပြုပုံကို ပြန်ပြီးကြည့်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
ဒီဆော့ဝဲလ်မှာပါဝင်တဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်း အောက်မှာကြည့်ပါဦး....
အဲဒိ့ဆော့ဝဲလ်ကို ဆိုက်ဘာဆိုင်မှာလည်း သုံးလိုက်ရော အသုံးပြုသူတွေကို အလွန်အမင်းအရှက်ရစေနိုင်သော...
လူတစ်ဖက်သားအတွင်ရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လိုက်သော နတ်ဆိုးတစ်ပါးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ...
ဒီဆော့ဝဲလ်မှာ အပိုင်းတွေကို အားလုံး တစ်ကန့်ချင်းစီ ခွဲချားပြီး Save ထားတော့ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ အရာအားလုံးကို
စက္ကန့်တိုင်းမှာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူထက်တောင် ပိုပြီးတိကျနေပါတယ်ခင်ဗျာ...
Screen shootကို အနည်းဆုံးစက္ကန့်အနေနဲ့
screen shoot ရိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်စက္ကန့်ကိုထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ...အဲဒိအတွက် ခင်ဗျားချစ်သူကိုသာဗီဇတ်အိုပြတယ်ဆိုရင် ခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို။
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက Screen shoot ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို
Export to AVI ဆိုတာကလည်း ပါလာသေးတယ်ဗျာ...
Task Manager ကနေ End process ပေးကြည့်လိုက်ပါရမလားလို့ ....
အဲဒိဆော့ဝဲလ်က ရီတောင်ရီနေဦးမယ် လုံးဝမရပါဘူးခင်ဗျာ...
Task Manager ရဲ့ Process မှာ FCAcheck.exe လို့ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
ကျွန်တော်ခုရေးတဲ့အကြောင်းကို ဘယ်နေရာမှာမဆို အသုံးပြုခွင့်ဖေါ်ပြခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ...
သူငယ်ချင်းများကို ဝေမျှပေးပါလို့လည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
ဒီတိုင်းလေးကူချမယ်ဆိုရင်တော့ မုန်းလေး ဆိုတဲ့ အမည်လေးတော့ တပ်ပေးဖို့
Last edited by tu tu; 07-02-2010 at 05:36 AM.. Reason: change font colour
အောက်ပါအသင်းဝင် 83 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုထွေး, ကိုစံငြိမ်း, ကိုဘွဲ, ကိုဦး, ချစ်သားငယ်လေး, ခွန်ညီး, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဇာနည်မောင်, ညီဂျော်ကြီး, ထွန်းတော်, ဒဿဂီရိ, နီထွန်းဦး, ပုလဲဖြူ, ဖိုးရှမ်း, ဖယောင်း, မူယွန့်, မျိုးဟန်ထက်, ရဲသွေးန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်တန့်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟန်မိုးလွင်, ဇော်ရဲပိုင်, နေကြည်မြူး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ယောနသံ, အောင်လွင်ဦး, အေးလူအောင်, အေးဇော်ဖိတ်, နိုင်သူရ, နိုးတူး, aggagyi, aiklao, arkaraung, Aung Aung, aung174, aungsan, AZM, baytar, bonge, bronitun, centurymg, gogogyi, hightechkey, hteenan, HTUT KHAUNG, KoYeWin, kyawswa100, KZaw, lokasara, MilkyWay, minthike, minthumon, moe gyi, Myo Min Zaw, nyi nge, nyinyi mt, Oliveway, openeyes, pannuko, Phoekwarlay, phoetharlay, phyomyintthein, PoeHapGyi, resident evil, soehtetpaing, stability09, syttun, tartarlay18, thatlwinoo, thura.it, thurein, Toxic, tu tu, winntun, wunna313, zaya007, zmhtut
Find More Posts by မုန်းလေး
ပြန်စာ - အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုသူတွေ&
ကျနော် စမ်းသုံးကြည့်ရသလောက်တော့ အတော်ဆိုးပါ့လားဗျ ထုတ်လုပ်တဲ့သူက ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကိုမုန်းလေးက ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနဲ့ သတိပေးနိုးဆော်သလို ကျနော် ကလည်း ရည်းရွယ်ချက်ကောင်းနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သုံးကြည့်ပါ။ အဲဒါမှ သိမှာလေ။ မမြင်ဘူး၊ မသုံးဘူးရင် မသိတော့ မရှောင်တတ်ဖြစ်နေမယ်။ သုံးဖူးထားတော့ ဘယ်လိုလဲ ဘာလဲ ဘာတွေလုပ်လို့ ရလဲ စသဖြင့်သိထားတော့ ရှောင်လို့ ရတာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ် တယ် ဟုတ်
အပေါ်မှာပြောထားသလိုပါပဲ။ အတော်ကြီးကို အသေးစိတ်မှတ်တာပဲဗျ အကုန်ပြန်ကြည့်လို့ ရနေတယ်။ အင်တာနက် ခုမှ စသုံးတဲ့ ညီငယ်၊ ညီမငယ် များ သတိထားကြပါ။ အထူးသဖြင့် ညီမငယ် များသတိထားကြဖို့ပါ။ အရှက်နဲ့ အသက်၊ အရှက်ကို ပိုပြီး တန်ဖိုးထားကြတာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ပါ။ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ အစ်မတွေနဲ့ ညီမငယ် တွေကို နည်းပညာနဲ့ လှည့်စားသွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်မိပါတယ်။ မိမိနဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုရင် မသုံးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်။ မိမိနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုရင်တော့ စိတ်ချရတာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ ခိုးယူပြီး ငွေညစ်တာတွေ ပါကြားလာရပါတယ်။ သိတဲ့သူ အချင်းချင်းလဲ သတိပေးကြပါ။ သတိထားပြီး အသုံးပြုကြပါခင်ဗျာ
http://up4vn.com/f=z70fnid7p (2.7 MB)
အသိပေး၊ သတိပေးတဲ့ ကိုမုန်းလေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ...
Last edited by bonge; 07-02-2010 at 07:44 PM.. Reason: စာပြင်
အောက်ပါအသင်းဝင် 51 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုမောင်မောင်, ချစ်သားငယ်လေး, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဇာနည်မောင်, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, မမထွန်းထွန်း, မုန်းလေး, မိုးတိန်, ဝင်းကျော်ဦး, သက်တန့်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသက်အောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ယောနသံ, အောင်လံလေး, အေးဇော်ဖိတ်, ဖြိုးမွန်ဦး, နိုင်သူရ, နိုးတူး, angelseeker, arkaraung, Aung Aung, aung174, aungsan, AZM, centurymg, hightechkey, htun30, minthike, minthumon, moe gyi, nyinyi mt, Oliveway, openeyes, pannuko, Phoekwarlay, phyomyintthein, PoeHapGyi, resident evil, smlat88, tartarlay18, thura.it, thurein, winntun, wunna313, zmhtut
တည်နေရာ: မန္တလေး မြန်မာ
ပို့စ် 48 ခုအတွက် 204 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကွန်ပျူတာကို ယူဆာတွေကို ကန့်သတ်ထားတယ်ဗျာ
ဥပမာဗျာ Task Manager ကိုပိတ်ထားတယ်ဗျာ administrator မှ အသုံးပြုလို့ရမယ်
ယူဆာတွေအနေနဲ့ အင်တာနက်ပဲသုံးလို့ရတယ် ဆက်တင်တွေကို ပြုပြင်လို့မရဘူးဗျာ
အဲလိုဆိုရင် အဲဒီဆော့ဝဲကို ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဗျာ
အဲဒီလို လုပ်နေတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ကြားသိထားရလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နိုင်သူရ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နိုင်သူရ
Originally Posted by နိုင်သူရ
ဟုတ်တယ် ကိုနိုင်သူရ ပြောတာ မှန်တယ်....
ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဆိုတာ သိထားဖို့တော့လိုတယ်....
ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဆန်းစစ်မိသလောက်ကတော့
Family Cyber Alert ကို အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ဖေါ်ဖို့ကို ကီးနှစ်မျိုးပေးထားတယ်။အောက်မှာကြည်ပါ...
အပေါ်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ကီနှစ်ခုထဲ က တစ်ခုကိုတော့ ဒီဆော့ဝဲလ်ကို ဖေါ်ဖို့မဖြစ်မနေသုံးရမှာပါ။ှ
အောက်ပါအသင်းဝင် 29 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုမောင်မောင်, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, မူယွန့်, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, ဇော်ရဲပိုင်, နိုင်သူရ, နိုးတူး, Aung Aung, aungsan, AZM, bonge, centurymg, minthike, minthumon, nyinyi mt, Oliveway, pannuko, Phoekwarlay, phyomyintthein, PoeHapGyi, shwemyay, tartarlay18, thurein, Toxic, tu tu, yawnathan
အပေါ်မှာဆက်ရေးနေရင် စာအရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့ ဆိုက်ဘာဆိုင်မှာ Task Manager ကိုပိတ်ထားရင်
ဘယ်ဆော့ဝဲလ်တွေအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ကြည့်နိုင်အောင် Task Manager ကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်သော
Task Manager Portable ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ပို့အသစ်တင်မလို့ပဲ... ဆင်တူရှိနေတော့ ကျွန်တော် မတင်ပဲ ဒီအောက်မှာပဲ အားဖြည့်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ဒီနည်းလေးနဲ့လည်း မိမိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Family Cyber Alert ရှိနေလားမရှိဘူးလားဆိုတာကို သိနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျာ... စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး..
အောက်ပါအသင်းဝင် 27 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဇာနည်မောင်, ဒဿဂီရိ, နီထွန်းဦး, ဝင်းကျော်ဦး, ဇော်ရဲပိုင်, ယောနသံ, ကြယ်စင်စိုး, နိုင်သူရ, နိုးတူး, arkaraung, athaylay1, bonge, centurymg, KoYeWin, minthike, minthumon, moe gyi, Oliveway, pannuko, Phoekwarlay, PoeHapGyi, shwemyay, tartarlay18, thura.it, Toxic, winntun
အခုလိုသိခွင့်ရတာ ကိုမုန်းလေးကို အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kolatt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kolatt
ဒီဆော့ဝဲလ် က full version လားခင်ဗျား ... ဒါမှ မဟုတ် trail version လား
trail version တောင် ဒီလောက် ကောင်းနေရင် full version ဆို တော်တော် အသေးစိပ်မယ်ထင်တယ်ဗျာ..
ကောင်းလည်း ကောင်းပါတယ်...သုံးတတ်ရင်တော့ အကြိုးရှိပါတယ်ဗျာ....မကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ မသုံးကျပါနဲ့ လို့ ဘဲ အတူတကွ တိုက်တွန်းကျတာပေါ့...
အသိပေးပြီး ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွတ် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ...
full version လေးများရှိရင် မစကြပါလားဗျာ...
Last edited by nyinyi mt; 31-07-2010 at 04:18 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ nyinyi mt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ကြယ်စင်စိုး, bonge, minthumon, pannuko, phoetharlay, tartarlay18, Toxic
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးတော့ winrar နဲ့ဖြည်ပြီးတော့ ဒပ်စတော့ပေါ်မှာ ရှော့ကပ်မပေါ်လို့ သုံမ ရဖြစ်နေလို့ သင်ပေးပါဦးဗျာ။ စမ်းကြည့်ချင်လို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ tinkokooo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by tinkokooo
ကိုတင်ကိုကိုဦးက ပို့စ်နံပါတ် (၅) ကိုမုန်းလေးဆွေးနွေးထား
တဲ့ Task Manager Portable လေးသုံးလို့အဆင်မပြောတာကိုပြောတာလားမသိ
ဘူး ကျွန်နော်ဒေါင်းပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်တာအဆင်ပြေပါတယ်ဗျ သေချာနောက်ထပ်
ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါအုံး ဒေါင်းပြီ ရာဖိုင်ဖြည်လိုက်ရင် .exe ဖိုင်လေးတစ်ခုနဲ့ Compile
HTML file လေးနှစ်ခုပဲပါပါတယ် .exe ဖိုင်လေးကို D-Click လုပ်လိုက်ရင် သဘောတူ
လား ဘာညာမေးပါတယ် agree ဆိုရင် Process Explorer box လေးပေါ်လာပါပြီ
အောက်မှာကြည့်ကြည့်ပါ...။ အဆင်မပြေသေးရင်ထပ်ပြောပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ စစ်တွေသားချေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မေဦးမွန်, centurymg, minthumon, PoeHapGyi, tinkokooo, Toxic
Refog Free Keylogger 6.1.6.1040
ကျွန်တော် ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ အရင်က တင်ပြီးသားတွေလည်း ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် အခု ဒီဆော့ဝဲကို ဘဲ version ထပ်မြင့် ထားတာဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေရာလေးမှာထပ်တင်ထားလိုက်ပါတယ် ....
Information is inestimable. Most software programs do their best to prevent data loss. Word processors save backup copies of files, browsers store login info that you enter on Web pages. Password applications let you store your passwords, backup software let you back up virtually everything. Yet, why do you have to spend your precious time restoring pieces of valuable info? Why do you have to lose your info once inawhile? The solution is Refog Free Keylogger. Despite its funny name, the application has nothing to do with monitoring. It simply saves all applications that you use on your own computer, the titles of their windows, and all keys you type.
ဒီလင့် လေးကနေ ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်......
( ဒီဆော့ဝဲလေးဟာ စပိုင် system ဖြစ်တာကြောင့်......လိုအပ်သော အကျိုးရှိသော နေရာများတွင်သာ အသုံးပြု ကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် )
Last edited by nyinyi mt; 10-05-2010 at 04:38 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ nyinyi mt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မုန်းလေး, centurymg, minthumon
25-07-2010, 05:35 PM
တည်နေရာ: lauk kai city
ကျန်နော် သုံးကြည့်ပါဦးမယ် ဖေါ်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Find More Posts by movingimage
26-07-2010, 04:40 AM
26-07-2010, 09:08 AM
သူရဲ့ဖိုင်သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းကိုပြန်လိုက်ရှာပြီး၊ ပြန်ဖြုတ်ရတယ်။ သူက Program ဖိုင်ထဲမှာ မနေဘူး။
ဒီလိုလေး သွားလိုက်ပါ။ C > Windows> System32 > FCA > uninspc.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးတွေ့ရင် Right Click လုပ်ပြီး၊ Run လိုက်ပါ။ Vista &7ဆိုရင်တော့ Run As Administrator ပေါ့။
Source : http://www.ehow.com/how_6610880_remove-keylogger-cyber-alert.html
နီထွန်းဦး, AZM, bonge, centurymg, Kyaw Nay Soe, minthumon, Oliveway
31-07-2010, 04:26 AM
Family.Cyber.Alert. ဆော့ဝဲလ်လေးကို full version တောင်းထားတာကြာပြီ .... ရှိရင်ပေးကြပါဦး
ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ် full version လေး များရှိရင် တင်ပေးကြပါဦး...
အဓိက ကတော့ အဲဒီလိုဆော့ဝဲလ် မျိုးကို full version အနေနဲ့လိုချင်တာပါ...
Last edited by nyinyi mt; 06-08-2010 at 05:35 PM..
FCA စော့လ်ဝဲလေးက uninstall လုပ်ရတာ မလွယ်ဘူးဗျ
ညီအစ်ကိုများ ကူညီကျပါအုံး။ ကျနော်က system 32 ထဲက FCA ဖိုဒါကိုပါ ဒလိပေးကြည့်တာ
FCA ကို uninstall လုပ်ဖို့ အတွတ် FCA ဖိုင်ရှိတဲ့ နေရာကို သွားပါ... အဲဒီထဲမှာ unistall ကို right click နှိပ်ပြီး
C > Windows> System32 > FCA > uninspc.exe
Run As Administrator နဲ့ 
run လိုက်ရင် စက်ထဲကနေ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်....
Last edited by nyinyi mt; 06-08-2010 at 05:33 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ nyinyi mt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-08-2010, 05:46 PM
Golden Eye ....key logger software ...full version လေးများရှိရင် တင်ပေးပါဦး...
ဒါမှ မဟုတ် အဲဒီလိုမျိုး refog key logger ဒါမှမဟုတ် ဆင်တူ keylogger ဆော့ဝဲလ် ( full version )ဆိုရင်လည်း လိုချင်ပါတယ်...
key logger software တွေကို full version တခါမှ စမ်းမသုံးဖူးသေးလို့ ပါ....
28-08-2010, 10:20 AM
Originally Posted by nyinyi mt
ကိုညီညီပြောတာ ......ဒါလေး လား .....
အကိုရေ ကျနော်တော့မစမ်းရသေးဘူး .... အထဲမှာတော့ Crack File ပါတယ်ဗျ ...
အဆင်မပြေ ရင်ပြန်ပြောပါဦးဗျာ ....
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ချစ်သားငယ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇေယျာအေး, ဖြိုးယံလေး, bonge, centurymg, mercury, minthumon, nyinyi mt, thura.it, Toxic
မြောက်ဒဂုံ မဟာမြိုင်အိမ်ယာ မှာရှိတဲ့ ဆေးဆိုင်နဲ့တွဲဖွင်ထားတဲ့ဆိုင်မှာအဲဒါမျိုးလုပ်ထားတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Win Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, bonge, centurymg, minthumon
Win Aung ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Win Aung
kGB keylogger လက်ရှိကျွန်တော်သုံးနေတယ်အစ်ကို ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး
hotel မှာပါ cctv key တွေကို ကြည့်ဖို့အတွက်ပါပဲ full version လေးပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ပစ်တိုင်းထောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungsan, bonge, minthumon, nitutx
နည်းပညာမျှဝေလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်. မည်သူတစုံတစ်ယောက်ကိုမှထိခိုက်စေရန်မဟုတ်ပါ...] အဲဒိ keylogger ရဲ့အကြောင်းကိုနဲနဲပြောပြပါလားဘယ်လိုအကြိုးအပြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကို တကယ်မသိလို့ပါ....အားလုံးလေးစားလျက်....
မိသားစုအတွက် သုံးဖို့ပါအရွယ်ရောက်တဲ့သားသမီးတွေရှိနေလို့ Family Cyber Alert Full version ရှိရင်ပေးကြပါဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Kyaw Nay Soe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
KeyLogger ကို စိန်ခေါ်မယ့် Gmail Secure Login Computer Chat software များဆိုင်ရာ020-08-2009 11:40 AM
keylogger ကိုလှည့်စားနည်း။ PyaitSone အထွေထွေဗဟုသုတ021-12-2008 05:40 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 04:50 AM